उपेन्द्र पागल दाइसँगका सम्झना
कोरोना नामको भाइरसले घरबाहिर निस्किन बन्देज जत्तिकै छ । त्राससँगै मानिसहरू मृत्युको भयले त्रसित छन् । हेर्छु घरबाहिर चकमन्न छ । सडक सवारीविहीन छ । आकाशमा कुनै आवाज छैन जहाजको । धुँवा र धुलो नभएपछि हावा पनि सफा लाग्छ । कुनै इन्जिनको आवाजले चराचुरुङ्गीहरू अत्तालिएर यताउता उडेका छैनन् । मानिस भय त्रासले छटपटाइरहे पनि जीवजन्तु र चराचुरुङ्गीहरू त शान्त हुँदा रहेछन् । फेसबुक र टेलिभिजन नभइदिएका भए मानिसको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला सोच्छु । तर सम्हालिन्छु, विद्युतीय समाचार नहुँदो हो त मानिस यति भयभीत पनि त हुँदैनथे नि ! कोरोना लाग्दैमा केही होओइन निको होला, तर त्यसले आफूलाई मात्र होइन परिवार र समाजलाई नै सङ्क्रमण फैलाउँदो रहेछ । त्यसैले पनि मानिस भयभीत छ । यिनै भयले उकुसमुकुस भइरहेको बेला साहित्यकार उपेन्द्र ‘पागल’को निधनको खबरले नमीठो झड्का दियो ।
उपेन्द्र पागल मेरा साथीहरूको पङ्तिमा उभिएको एक नाम । उहाँसँगका अन्तरङ्ग कुरा खोतल्न सैंतीस सालमा पुग्नुपर्छ । हो, हाम्रो सम्बन्धको शुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ । दाइ मेरानिम्ति आजका मितिसम्म विभिन्न भूमिकामा रहनुभयो । यसरी मेरो उमेरको एक्काइस बर्षमै गाँसिएको हाम्रो दौँतरी गणनाले झण्डै दुइटा एक्काइससम्म बिते । शुरुमा मेरा हाकिम उहाँ, पछि हामी साथीसाथीमा रुपान्तरित भयौँ । हाम्रा रहर एकै किसिमका, जागिर खाने बाध्यता एकै किसिमका र सोचाइ पनि एकै किसिमका मात्र भएनन् समयक्रममा कार्यालय पनि संयोगवश एउटै भएका थिए ।
आआफ्नै विवशतामा टाढिनु परेको अवस्थामा अचानक आयोजना हुने गोष्ठी सम्मेलनले हामीलाई एकाध घण्टाको लागि भए पनि मिलाइदिन्थ्यो । विगतदेखि हेर्दै जान्छु, दाइ औसत मानिसभन्दा फरक हुनुहुन्थेन, न कुनै विशिष्ट गुणले भरिएको । यही माटोमा हुर्किएका दाइमा पनि रिस थियो, क्षमा थियो, घृणा थियो र माया थियो । यी सबै गुण अवगुण भएरै दाइ एक मानिस हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँको निधन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई महान बनाउनुपर्ने न कुनै कारण नै छन्, न त खराबको तहमा झार्नुपर्ने कुनै विषय नै छन् । औसत दाइमा औसत गुणहरू थिए । तर साहित्य, कलामा त दाइ औसतभन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो । दाइ लेख्नुमात्र हुन्नथ्यो, लेख्न उत्प्रेरित पनि गर्नुहुन्थ्यो । गाउँमा हुर्किए, बढेका दाइ विशेषतः गाउँलाई औधी माया गर्नुहुन्थ्यो । खोज्नुहुन्थ्यो गाउँमा लुकेका प्रतिभा । हो, म गाउँमा थिएँ र हामी झन्झन् सामीप्य हुँदै गयौँ । दाइसँगको अति निकट उठबसले पनि मृत्युको खबर सुनेर निकै भावविह्वल भएँ दिनैभरी ।
अँ त दाइ पनि गजबकै हुनुहुन्थ्यो । हाकिम हुँदा हाकिमजस्तै र साथी हुँदा साथीजस्तै । हाम्रो सम्बन्ध हाकिमभन्दा पनि अधिकत्तर साथीसाथी जस्तै भएर बित्यो ।
हामीबीचको रमाइलो प्रसङ्ग पनि उत्तिकै छ । दाइ सूचना केन्द्र विराटनगरको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । दर्जनौं कर्मचारीबीच हाकिम भएर बस्नुभएका दाइमा एक खालको लघुताबोध पनि थियो आधा दर्जन कर्मचारीको हाकिम हुँदा । लघुताबोध सतहमा नआए पनि अन्तर्यमा लुकेको म सहजै अनुमान गर्थेँ । तर दाइलाई सूचना केन्द्र वरदान पनि हुँदै गयो समयक्रममा । यतिको लोकप्रिय व्यक्तित्व आर्जनमा सूचना केन्द्रकै उपज भन्नुहुन्थ्यो पछिपछि त मसँग । म हुलाकमा थिएँ, दाइ सूचना केन्द्रमा । कुनै दिन पनि हामी संवादविहीन हुनु दुवैलाई नरमाइलो लाग्थ्यो । दाइले फोन गर्नु भएछ मलाई । म हाकिमकै कोठाछेउमा थिएँ । फोनको रिसिभर उठाउने हाकिम भरखरै बहाली भएका थिए । बोल्दाबोल्दै अट्टहास गरेको पनि सुनेँ । ठानेँ, हाकिमका कुनै अन्तरङ्ग मित्रसँग गफिँदै होलान् । हाकिम बोल्दाबोल्दै रोकिए र पियन बोलाए । हाकिमले यताबाट ‘को भिखारी ? ..... होइन, यो अफिसमा भिखारी पनि छन् ?’ बोलेको त सुनेको हुँ तर उनले बोल्दाबोल्दै जानु अनुशासनभन्दा विपरीत हुन्थ्यो । पियन आएर मलाई बोलाए । पागल दाइ र म टेलिफोनमै गफियौँ मन लागुञ्जेल । हाम्रो गफ सकिएपछि हाकिम झन् हाँसे । खासमा हाकिमले फोन उठाउँदा सोधेछन् को बोल्नुभो ? नयाँ आएका हाकिमसँग दाइको चिनजान रहेनछ, भन्नुभएछ ‘म पागल बोल्दैछु ।’ सुन्दै अनौठो लाग्ने नाम सुनेर हाकिम हाँस्नै नै भए । हाकिमको हँसाइ यत्तिमै सीमित भएन, कसलाई खोज्नुभयो भन्ने हाकिमको प्रश्नको उत्तरमा दाइले थप्नुभएछ ‘भिखारीलाई खोजेको ।’ अनि हाँस्नका लागि अरु मसला नै किन चाहियो ? त्यही भएर हाकिमको अट्टहासले कोठै उचालिएको थियो ।
हाकिम थिए लोकप्रसाद आचार्य, फरासिला, एक राम्रा कवि र मुक्तकबाज । पछि पनि हाकिम रमाइलो वातावरण बनाउन कुरा निकाल्थे, ‘पागलले भिखारीलाई खोजेको पनि आफ्नै कानले सुनियो र देखियो ! ’
दाइ सरलमात्र होइन, उत्तिकै कोमल हुनुहुन्थ्यो । परोपकार कर्तव्य ठान्नुहुन्थ्यो । शायद त्रिचालीस सालको फागुन महिनाको कुरा हो । राजा वीरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणमा निस्किएको समय थियो । धनकुटा मुकाममा बसेकी रानी अचानक विराटनगर सवारी हुने कार्यक्रम भएछ । नेपाल महिला सङ्गठनले विराटनगर नगर पञ्चायतमा बडामहारानीलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम अचानक तय ग¥यो । सबै अचानक भए पनि सतर्कता अपनाउनु प्रशासन र पञ्चका लागि आवश्यक थियो । बडामहारानीको सवारी भएपछि कार्यक्रम तालिका पेश गर्नुपर्दाे रहेछ ।
दुइ प्रति कार्यक्रम तालिका र अभिनन्दन लेख्ने मानिसको खोजीमा राजदरबारका कर्मचारी र सवारी कार्यालयका कर्मचारी घुम्दै उपेन्द्र दाइकोमा पुगेछन् । आफूले त्यस्तो काम नगर्ने बताउनुभएछ । त्यो बेला विराटनगरका चर्चित वामपन्थी नेता लव प्रधानले रानीको अभिनन्दन किन लेख्थे र ? उपेन्द्र दाइले पनि नमान्नु भएपछि समाधानका लागि उपाय खोजेछन् दाइसँग । दाइले मेरो किराना पसलमा पठाइदिनु भएछ लेखाउन ।
राती ८ बजिसकेको थियो, पसलको ढोका ढकढकाउन थाले अपरिचित मानिस । दरबारिया भाषामा तीन ताउ कागजमा एकएक प्रति लेखिदिन अनुरोध गरे । कागज र लेख्ने साइनपेन पनि सँगै लिएर आएका । दरबारका कर्मचारीजस्तो नलाग्ने उनीहरू निकै विनम्र थिए । उनीहरू त्यहीँ हुँदाहुँदै दाइले एक जना पियन पठाएर मलाई बोलाउनुभो । गएपछि दाइले लेख्ने तरिका सिकाइदिनुभो र भन्नुभो, ‘यिनीहरूलाई अप्ठेरो परेकाले रुपैयाँ जति भन्यो त्यति दिन्छन्, राम्रो मौका आएको छ बद्री, चार÷पाँच सय घटी नलेख्नू है’ भनेर बिदा गर्नुभो । थोरै संकोच अनि अलिकति खुसी लिएर दोकानमा आएँ । उनीहरू बसेकै थिए, मैले सात सय नभई लेख्तिनँ भनेँ । उनीहरूले निकै जोड गरेपछि १ सय छुट गरेँ । त्यो बेला खरिदारको तलब नै लगभग २ सय ५० हुँदो हो । तलबको तुलनामा पारिश्रमिक निकै थियो । मलाई एक किसिमले डर पनि थियो, भोलि हप्काएर त्यति नदेलान् भन्ने । राती एक बजेसम्म मिहिनेत गरेर अभिनन्दन पत्र, कार्यक्रम तालिका लेखिसिध्याएँ । रुपैयाँ पाउने लोभमा खिपेर लेखेँथेँ, अक्षर पनि राम्रा भएछन् । उनीहरूले फेरि घटाउन खोज्लान् भन्ने मेरो आशङ्का उनीहरूको व्यवहारबाट तुहाइदिए । दरबारका कर्मचारी, अनुशासन कडा हुँदो हो मलाई त ६ सय नै दिए । न बिल भौचर नै मागे, न कुनै दलाली गरे । उज्यालो अनुहारमा बरु उनीहरूले रुपैयाँ सँगसँगै मीठो र रसिलो धन्यवाद पनि दिए । म त सपना हो कि झैँ गरेर एकछिन त अलमल्ल परेँ ।
उनीहरू मैले लेखिदिएको तीन थान पत्र लिएर गएपछि म उपेन्द्र दाइलाई भेट्न गएँ । काम मिलाइदिए बापत केही दिनु कि नदिनु दोधारमा थिएँ । दाइले खुसी हुँदै राम्रै पारिश्रमिक दिन्छन् भनेरै तिमीलाई पठाइदिएको हुँ, तिम्रो जीवनको पहिलो पारिश्रमिक, मनलाग्दो खर्च गर भन्नुभो । दाइलाई धन्यवाद दिएँ मनमनै र फर्किएँ । राम्रो लेख्ने म मात्र थिइनँ, तर साहित्यिक मानिस भएकाले मलाई माया गर्नुभएको रहेछ ।
उमेर र बिमारले दाइको भौतिक शरीरको अन्त्य तर क्रुर थिएन । पक्कै पनि जागिर भूतपूर्व भएको थियो र अभूतपूर्व थियो प्राज्ञ । पाउने धेरै पद र सम्मान राज्यबाट दाइका भागमा परेका थिए । नागरिक तहबाट पाउने सम्मान र पुरस्कार पनि पाइसक्नु भएकै हो । दुर्भाग्य ! दाइभन्दा शक्तिशाली थियो रोग, दह्रो आत्मबल हुँदाहुँदै पनि सक्नुभएन जित्न ।
कवितामा अमूर्त शैली रोज्ने दाइ, काम गराइमा मूर्त हुनुहुन्थ्यो । नयाँ किताब पढ्ने चाह हरेक साहित्यिकहरूसँग राख्नुहुन्थ्यो । रमेश सायनको छुटेका अनुहार मैले पु¥याइदिँदा दाइको अनुहार निकै हँसिलो देखिन्थ्यो । कस्तो राम्रो बानी थियो भने सिकारुहरूका रचनामा पनि उच्च सौन्दर्य, नयाँ शिल्प कतै न कतै देखिहाल्नु हुन्थ्यो । गज्जबको बानी थियो, नराम्रोबाट पनि राम्रो खोज्नुहुन्थ्यो । हामी नकारात्मक सोच भएकालाई दाइ सुन्दर कुरा भेट्टाएर चकित बनाइ दिनुहुन्थ्यो । प्रतिभाहरूलाई खोजीखोजी, फोन गरीगरी उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो ।
सामाजिक मनोविज्ञानमा आधारित विषयवस्तुमाथि कथा लेख्ने पागल, व्यवहारतः सामाजिक पनि हुनुहुन्थ्यो । सोच्छु, लेख्न बस्दा पनि उहीँ पुग्छु । दाइले ओछ्यानबाटै मलाई भन्नुभएको सम्झन्छु, ‘साहित्यको नाममा व्यापार गर्नेसँग जोगिनु रहेछ बद्री ! म मुछिएँ थाहै नपाई रछ्यानमा । बिरामी यो अवस्थामा पनि उनीहरूको व्यवहार सम्झेर किटकिट हुन्छु । के गर्नु, तैपनि साथीभाइ नै हुन् चित्त बुझाउँछु ।’
दाइ ! म पनि त्यै भएर तपाईंको अन्तिम बिदाइपछि चित्त बुझाउँदै यतिसम्म लेख्न सकेँ ।
प्रिय बूढीघाट !
सैंतीस साल यता उपेन्द्र दाइ र मेराबीच कति प्रगाढ बनेछ सम्बन्ध, दाइको अन्तिम बिदाइमा पनि सामेल हुन पाएँ नि !
यति प्रिय र कोमल मन भएका उपेन्द्र दाइलाई तिमै्र सुन्दर बगैँचा साक्षी राखेर हामीले अन्तिम बिदाइ गर्याैँ । तिम्रो सुन्दर, शान्त र सौम्य आँगनमा अन्तिमपल्ट दाइ पनि शान्त देखिनुभएको थियो । र मनमनै कामना पनि गरेँ दाइ, तपाईँको आत्मालाई शान्ति मिलोस् !